ကုလားကို အဖေခေါ်ချင်နေသူသို့(၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Members » ကုလားကို အဖေခေါ်ချင်နေသူသို့(၂)
Posted by Mr.ဝက္ႀကီး on Jul 28, 2012 in Members | 39 comments
Tehrik-i-Taliban Pakistan (the TTP) ဆိုတဲ့ အကြမ်းဖက်သမားအုပ်စုအကြောင်း
ဖော်ပြပါပုံထဲက ညာဖက်က မုတ်ဆိတ်နဲ့ လူကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ခြိမ်းမြောက်တဲ့ TTP အကြမ်းဖက် အဖွဲ့က ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Ehsan Ullah Ehsan ဖြစ်ပါတယ်…။
ရိုဟင်ဂျာကိစ္စ အကြောင်းပြုပြီး ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို ချိမ်းခြောက်တဲ့ Tehrik-i-Taliban Pakistan (the TTP) ဆိုတဲ့ အကြမ်းဖက်သမားအုပ်စုဟာ US Drone (မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်) စာ ခဏခဏ မိလို့ ခေါင်းဆောင်တွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ကြွနေတဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်..။
သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင် Ameer Hakimullah Mehsud (သေနတ်နဲ့ချိန်နေသူ) ဟာ ၂၀၁ဝ ဇန်နဝါရီ ၁၄ တုန်းက သူအိပ်နေချိန် မှာ US Drone က ပစ်လိုက်တဲ့ ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကြောင့် သူ့လူ ၁၈ ယောက်နဲ့အတူ သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမယ့် မသေခဲ့ပါဘူး..။ ဒဏ်ရာသာရခဲ့ပြီး နှစ်လအကြာ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေထဲမှာ ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်..။
ဒါပေမယ့် ယခုနှစ် ၂၀၁၂ ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့ညမှာ US Drone က ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့ ဒုံးကျည်ကြောင့် သေဆုံးသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်..။
TTP ဘက်က မသေဘူးလို့ ငြင်းဆိုပေမယ့် အရင်ကလို သူတို့ခေါင်းဆောင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှု ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ယနေ့အထိ ထပ်မံမထုတ်ပြန်တော့ပါဘူး။
မနေ့က ကျုပ်တင်တဲ့ပိုစ့် အဖျက်ခံရတယ် ဘယ်သူက ဘာလို့ဖျက်တာလဲ ကျုပ်မေးပါရစေ။ ကျုပ်ဆီကို အီးမေးလ်မပို့ပဲနဲ့ ဒီအတိုင်းအဖျက်ခံလိုက်ရဒယ်။
ကျုပ်တို့ပြည်တွင်းအကြောင်း သေချာမသိဘဲ စောက်ကြီးစောက်ကျယ်နဲ့ ဖင်ခေါင်းကျယ်ပီးလျှောက်ပြောနေတဲ့သူကျတော့ ဒီအတိုင်းလွှတ်ထားတယ် ။ သူက ဒီဆိုဒ်ကိုထောက်ပံပေးထားတဲ့မျက်နှာကြောင့်လား။ ကျုပ်တို့က သူပြောသမျှ ခေါင်းငြိမ့်နေရမှာလား ပြောပါအုံး။
ဒီပိုစ့်ကိုလည်း ဖျက်လို့ရဒယ် ကျုပ်ကထပ်တင်မှာပဲ ။ အဲ့ဒါမှ မကျေနပ်ရင် ထုတ်ပလိုက် ရှင်းလား။
စောက်ကုလားတွေကို သတ်ဖို့တန်းစီခိုင်းတဲ့လူဂျီး ကျုပ်နာမည်ကို ရှေ့ဆုံးမှာစာရင်းသွင်းထားလိုက်။
ဟိုဘက်ကပ်ပီးမြှောက်ရေးလိုက် ၊ ဒီဘက်ကပ်ပီးမြှောက်ရေးလိုက်နဲ့ ဆိတ်လဥလိုလုပ်မနေနဲ့။
ဒယ်ဒီလား ဒယ်ဒီလား ဒယ်ဒီလားကို ချစ်တယ်…
ကိုယ့်ကိုယ်တွေ့ မဟုတ်တဲ့ ဓာတ်ပုံ နှစ်ပုံကိုကြည့်ပြီး
အင်တာနေရှင်နယ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝက်ဆိုဒ်လောကမှာ ေ၈ဇက်အတွက် မျက်နှာပျက်စရာဘဲ
မတူတဲ့ အမြင်လေးနဲ့ ရေးလိုက်တာပါ
ဆိတ်လဇိလို ဟိုဘက်ကပ်လိုက် ဒီဘက်ကပ်လိုက်တော့ မရေးတတ်ဘူး
ပညာရှင်ပီသစွာနဲ့ မရေးတတ်ဘူး တည့်တည့်ပဲရေးတတ်တယ်
အယ် မနေ့က တစ်ခု ဒီနေ့တစ်ခု ဘယ်လိုတွေများဖြစ်နေပါလိမ့်နော်
မြန်မာပြည်အနောက်ဖက်ကမ်းအရေးအခင်းကိုအကြောင်းပြုပြီး… ဘာသာရေး ပဋိပက္ခအသွင်ဆောင်လာစေတယ်(တွန်းပို့တယ်)ယူဆတဲ့.. ပို့စ်တွေ.. အကြောင်းပြချက်မရှိပဲ.. ဖျက်ပစ်ပါမယ်နော..
အဖမြန်မာပြည်နောင်ရေးအတွက်ပါ..။ တဲ့ သူဂျီးက ဖိုရမ်ထဲမယ်ရေးထားတယ် ။
ဘုဘု ရေးသားချက် ကို ထောက်ခံတယ်။ ဒီပို့စ်မှာဝင်မန့်မိလို့ အရေးယူမယ်ဆိုရင်
ကိုကြောင်ကြီးကိုလဲ ထည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့၊ အားလုံးအလိုတူ အလိုပါ ချည်းဘဲ၊
ကိုယ့်လူမျိုး အရေးဟာကိုယ့်အရေးပါ ၊
ဟိုဒင်းတွေ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ တခုခုလာလုပ်တော့မှ ပြင်ဆင်မယ်ဆို အရမ်းနောက်ကျသွားမယ်၊
မြန်မာပြည်မှာနေကြတဲ့ နိုင်ငံသားတွေ ကြိုသိထားဖို့အမှန်လိုအပ်တယ်၊
ဖြစ်လာတော့မှ ဆိုရင် အားလုံး ဒုက္ခကြီးကြီးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ်၊ ကြိုသိတော့ ပို မကောင်းဘူးလား ။
မြန်မာ့ဝက်ဆိုဒ်မှာ မြန်မာအကြောင်းမရေးရင် ဘာအကြောင်းရေးရမလဲ မေးချင်လိုက်တာ ။
ဒီsite ကိုတာဝန်ယူတဲ့ သူကြီးက မွတ်စ် ပါ၊ နောက်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး၊
ဟိုဘက်ကပင်းပြီးpost ရေးတာဆိုတော်တော်နဲ့မပျောက်၊ မဟောင်းတာ သတိထားမိမှာပါ၊
three colors ရေ .. တော် ရုံ ဆို ဘယ်တော့မှ ဖြေရှင်းချက်မထုတ်တတ်တဲ့ ဥပက္ခာ ပြုထားလေ့ရှိတဲ့ သူကြီးက သူ မွတ်စ် မဟုတ်ကြောင်း အတိအလင်း ဖြေရှင်းချက်ထုတ်ထားဘူးပါကြောင်း ။
ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ကာကွယ်ရေး ရေးပေမဲ့ ရန်ပွားစေမဲ့ စကားလုံးပါရင်တော့ ကြောက်လို့ မဟုတ်ပေမဲ့ မပါသင့်ဘူးလို့ ထင်ပါကြောင်း ။
ဒစ်ဂလောက် – ဒစ်ဂလောက် ။
အားသာ(တယ်ထင်)တဲ့ဖက်ကလူတွေကိုယ့်ဖက်ပါလာအောင်.. (ပါလာမလားဆိုပြီး) .. အုပ်စုခွဲခြားပြီးဘက်ကပ်တယ်ယူဆမိပါတယ်..
အဲလိုနဲ့.. ကျုပ်လည်း.. မိုးပြာဖြစ်ဖူး….
ကဲကဲ သူကြီး က ဝန်ခံသွားပါပြီ ဦးလေးတို့ရေ။ မိုးပြာလည်း ဖြစ်ဖူးတယ်တဲ့။ မွတ်ဆလင်လဲ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်တဲ့။
http://myanmargazette.net/134139/creative-writing ဘဘဘလက်ပိုစ်မှာ သူကြီးပြန်ထားတာပါ။
မဟုတ်ပဲ.. တဆိပ်ကပ်ခံရတာကို ပြောပြတာဟေ့…
သူကပါ.. အလိုတူအလိုပါ.. ၂ထပ်တဆိပ်ကပ်သွားပြန်ပြီ..
သူတို့ စောက်သုံးမကျတဲ့ သဘောတွေရှိလေလေ
ဘယ်သူကဘယ်သူလည်း ကျုပ်မှ ဟုမ်းပေ့မကြည့်တတ်တော့ အခက်သား
ကျုပ်လည်း ဂေဇက်မန်ဘာ အသစ်ကလေးတုန်းက
အဲဒီ ကွန်မန့် ကျုပ်တွေ့ဖူးပါတယ်။ ကျုပ်က အဲဒီတုန်က ဝင်ရေးမလို့ စဉ်းစားပြီးမှ မရေးချင်တာနဲ့ လွှတ်ပေးလိုက်တာပါ။ အဲဒီကွန်မန့်ကို အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင် ပြန်ဖို့ရှိပါတယ်။ အဓိက ပြန်ချေပချင်တာက “စိတ်ပညာသဘောအရဆို ကိုယ်က အားနည်းတော့ အားသာ(တယ်ထင်) တဲ့ဖက်လူတွေ ကိုယ့်ဖက်ပါလာအောင်(ပါလာမလားဆိုပြီး) အုပ်စုခွဲခြားပြီး ဘက်ကပ်တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်” အဲဒီစာသားကို ချေပချင်တာပါ။ ပြောစရာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယခုလောလောဆယ် သူ့မှာ မိသားစုအပူ ရှိနေနိုင်တာမို့ လူသားတယောက် အနေနဲ့ ကျနော် မပြောချင်လို့ပါ။ နောက်ပြီး ကျနော် ပြောလိုက်ရင် သူတင်သာမကပဲ နောက်တယောက်ပါ ရေရေလည်လည် နာသွားနိုင်ပါတယ်။ သူပြောတိုင်း မယုံပါနဲ့။ သူ့စကားတွေလည်း ရှေ့နောက် မညီပါဘူး။
တကယ်တော့ ဘယ်သူမှ သူ့ကို တံဆိပ်မကပ်ပါဘူး။ သူ့အပြုအမူ တွေကပဲ သူ့ကို တံဆိပ်ကပ်သွားတာပါ။ မရှင်းသေးရင် နောက်ကြာမှ တခါထပ်ပြောပါမယ်။
ဗမာ(မြန်မာ)မကောင်းကြောင်းဆို သူက ထိပ်ဆုံးကနော်။
မြန်မာဖြစ်ရတာရှက်တယ် ဆိုတဲ့ ပို(စ့်)လားမသိ ၁ဝ မှတ်တောင်ပေးသတဲ့။ခိခိ
Dear Three Colors,
I can see the logo of that webpage is in Arbic (Similar to Aljareea logo). As far as he’s considerate of right & wrong things and helping Myanmar the way he can, we have to welcome.
Ko Kai is linked to this website http://www.mandalaytube.com/ via MG. You will notice that the logo of that webpage is in Arbic (Similar to Aljarzeera) but if he’s considerate of the right & wrong and contribute to Myanmar anyway he can, we have to welcome.
အားလုံးသတိပြုရမှာက ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် အရာရာ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ချင်လို့
ဆက်ဖြစ်တော့မှာတွေကို တောင့်ခံရတော့မှာ ပ ။
ပထမ ပို ့စ်တုန်းကတော့ မန် ့ရမှာ လန် ့လို ့
ကိုအောင်ပု ရဲ ့ကွန်မင့်ကို ဘက်စ်အန်းစားရွေးပေးထားတာကို အားပေးပါတယ်
ဘုလေး ရဲ ့
“““ ဆိတ်လဇိလို ဟိုဘက်ကပ်လိုက် ဒီဘက်ကပ်လိုက်တော့ မရေးတတ်ဘူး
ပညာရှင်ပီသစွာနဲ့ မရေးတတ်ဘူး တည့်တည့်ပဲရေးတတ်တယ် ””””
အဲဒါကတော့ ဘယ်လို ပြောရမလဲပေါ့နော်။ ကျနော့်တုန်းကလည်း ဒီလိုပဲ ဗမာတွေကို လူမျိုးနဲ့ချီပြီး
ပိုးစိုးပက်စက် ဆဲတဲ့ပို့ဆိုရင်(အဲဒီပို့စ်မှာ ကျနော့်နာမည်ကိုတောင် ဆောင်းပါးထဲ ထည့်သေးတယ်) Home page မှာ sticky ကပ်ပြီး အကြာကြီး တင်နေခဲ့တာဗျ။ ပြီးတော့ စကားတွေကလည်း အကုန် ရှေ့နောက်မညီပဲ သောက်တလွဲတွေချည်းပဲ။ အခုလည်း ပြန်ပြောနိုင်ပါတယ်။ မှတ်မိပါတယ်။ ဟာ အဲဒီတုန်းက ဘာပြောကောင်းမလဲဗျာ။ ကျနော်သာ အရှင်းမတတ်ရင် လူတွေက ကျုပ်ကို ဝိုင်းဆဲတော့မှာဗျ။ အဲဒါဗျာ ကျုပ်က တချက်ချင်းလည်း ပြန်ရှင်းရော personal တိုက်ခိုက်တယ်တို့ မေတ္တာပို့ပါတို့ သူများငိုဖို့ ငါရယ်မယ်တို့ ဆောင်းပါးတွေ ထွက်လာပါလေရောဗျာ။ ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘာဝလို့ သဘောထားပါဗျာ။ လူတွေက တကယ်တမ်း ဘယ်လောက်ပဲ တရားမျှတတယ် ပြောပြော ပင်းတတ်တယ်ဗျ။ ပေးထား ကျွေးထားရင်လည်း မလွန်ဆန်နိုင်ကြဘူး။
ဒီကောင်တွေက ဒါကိုခလုတ်မတိုက်ရရင်စကားမပြောတတ်တော့ဘူးလား၊ကုလားကို အဖေခေါ်။ကုလား
ကိုကိုးကွယ်နေတဲ့အကောင်တွေကဒီစကားပြောနေတော့ရယ်ဖို့ကောင်းနေပြီး၊သူကြီးကိုလဲပေါက်ကရပြေ ချင်တယ်အဆင့်အတန်းမရှိရင်လဲဒီထဲစာဝင်ရေးမနေနဲ့နေတော့၊တောခိုလိုက်၊သတ္တိမရှိဘဲထဘီအောက် လက်သီးပြမနေနဲ့၊မင်းတို့အဆွေတွေအမျိုးတွေထဲမှာအာဇာနည်ရတဲ့အကောင်တစ်ကောင်မှမပါဘူး၊ဒီလို့အဆင့်အတန်းမရှိရေးလာတာရခွေးတွေဘဲ၊ပြောရရင်လဲလူမျိုးရေးဖြစ်အုံးမယ်၊ဒါကြောင်းမြွေပွေးနဲ့တွေ့ လာာရင်ဒီကောင်တွေကိုအရင်သတ်ဆိုတာ၊ရှေစာဆိုတွေ ပညာရှိတွေရေးခဲ့ကြတာ၊
ကုလားကယ်လို့ရခိုင်ကျန်တာ ၊ပြီးတော့ စောက်စကားများနေသေးတယ်၊ သူတို့သတ်မယ်ဆိုရင် မင်းတို့
တာ ၊သေနတ်သံကြားရင်ခွေးပြေဝက်ပြေးပြေးတာ၊ရှေတန်းမှာငါ မင်းတိုလိုကောင်တွေတခါမှငါမတွေ့ဘူး၊
မင်းတို့ လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဘာညာအကောင်းတွေလဲအလကားဘဲ၊တခါမှ ရင်ဆိုင်မတိုက်ရဲဘူး၊ဒါမြ
တိုက်စားဘို့ဘဲတောခိုတဲ့အကောင်တွေ။လက်နက်မရှိတဲ့သူ လုဖို့၊မုဒိန်းကျင့်ဖို့ဘဲသိတဲ့အကောင်တွေ .
အခုမင်းတို့ လုပ်နေတာနဲ့ ရခိုင်မှာလာလည်မယ်သူတွေ၊လာရောက်လည်ပတ်မယ်သူတွေမရှိတော့ဘူး၊
ဘာရလဲ၊ နယ်စပ်ဒေသမှာလဲ ဒီလောက်နစခအဖွဲ့ဝင်တွေသေသေချာချာ မလှည်ကျစောင့်နေကြတာ၊
ရခိုင်မှဆိုလဲ ဗုဒ္ဓဘာသာကလဲံပြီးကျန်တဲ့ဘာသာတွေ မှတ်ပုံတင်ရှိတာ၊ဝန်ထမ်းကဒ်ရှိတာတောင်သွားဖို့
အရေး အာမခံနှစ်ယောက်နဲ့ ဝန်ခံချက် အဆင့်ဆင်လုပ်ပြီးပြည်နယ်အထိတင်ပြီးဘုတ်ထိုင်ပြီးမှ သွားလာ
ခွင့်ရတာကွ၊မင်္ဂလာဆောင်ဖို ကအစ ခွင့်ပြုချက်လုပ်ပြီးမှရတယ်လို့ ရခိုင်မှနေတဲ့ငါမိတ်ဆွေကသေသေချာ
ချာပြောတာ ၊အထောက်အထားကအစ ယူကြည့်ပြီးမှပြောတာ၊အခုမင်းတို့လုပ်နေတာရခိုင်ကိုနှစ်နေတာ၊
ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုသတ်နေတာကွ၊မင်းတို့ ပညာမတတ်တော ရှုးတိုက်တိုင်းကိုက်ချင်နေတာ၊မင်းတို့သူတို့
ကိုရှင်းထုတ်ပြီး။ဒုက္ခသည်လိုူ့အလှူခံပြီးနေမှာလား၊မင်းတို့မလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေ၊လယ်ယာကိုင်းကျွန်း တွေ၊ငါးဖမ်းတာ၊အမဲသားတွေသူတို့ကိုအားကိုးပြီးနေကြရတာ၊ရခိုင်အခြေခံထွက်ကုန်ကိုဈေးထဲ သွားေ လ့လာပါအုံးကွ၊သူတို့ကိုဒုက္ခပေးလို့ကောသမိုင်းဖျောက်လို့ရမလား။သူတို့အစဉ်အဆက်ရှိခဲ့တဲ့ သမိုင်းဖျောက်လို့ရမလို့လား၊ရခိုင်အရင်နယ်နမိတ်ကိုကောဖျောက်လို့ရမလား၊ ပြီးတော့ဘာသာတရားအရဝဋ်ကိုကောမကြောက်တော့ဘူးလား၊ သူတပါနှိပ်စက် ရင်မင်းတို့ကောမခံရတော ့ဘူးလား၊ သူများနှင်ထုတ်၊မင်းတို့ကောနှင်ထုတ်မခံရဘူးလား၊သူတပါသတ်မင်းတို့သံသရာမှာ၊ဒီလောကမှာပြန်အ သတ်မခံရတော့ဘူးလား ဉာဏ်မရှိတဲ့ဘုဂလန့်နဲ့အကောင်တွေရေ
တိုတိုရဲခေါင်ရေ …. တော်တကယ်ဇပြင်းနေရင် တော့်ရဲ့ ဂျီမေးလ်လိပ်စာနဲ့ ဖေ့ချဘုတ် အကောင့်လေး ရေးပေးလိုက်ပေါ့တော်…
Hey son of the bitch and grandson of the pig Yel Kaung,
ဒါကြောင်းမြွေပွေးနဲ့တွေ့ လာာရင်ဒီကောင်တွေကိုအရင်သတ်ဆိုတာ၊ရှေစာဆိုတွေ ပညာရှိတွေရေးခဲ့ကြတာ၊
Do you really know what that means??? If you want to know it means kill the Rakhine Banana plant first because the juice of the banana plant will cure the pioson of the cobra. Since cobra pioson is so deadly, he/she would not be able to cut the banana plant after cobra bits him/her.The real meaning of that saying is that but some people like you use half of that saying and use it to discriminate Rakhine people.
ပြီးတော့ဘာသာတရားအရဝဋ်ကိုကောမကြောက်တော့ဘူးလား၊ သူတပါနှိပ်စက် ရင်မင်းတို့ကောမခံရတော ့ဘူးလား၊ သူများနှင်ထုတ်၊မင်းတို့ကောနှင်ထုတ်မခံရဘူးလား၊သူတပါသတ်မင်းတို့သံသရာမှာ၊ဒီလောကမှာပြန်အ သတ်မခံရတော့ဘူးလား
Yes, we do know if we do the bad things , asareaction, bad things will happen to us. Buddha taught us that simple. But think of the reality. In this violence, who did first and who react later? If all the people (including kalars like you) in this world can realize the truth of that action and reaction, you will not be writing this kind of post and I will not be replying like this too. I noted you said Buddha/Jesus were among of the Prophets sent by your Allah. But did Buddha or Jesus ever say to kill anyone because he/she did not in the same belief. If this book I share you is the truth of Islam, I pity on you guys for not knowing the right & wrong things.. Here is the link if you can read English.
မင်းကိုမေးလိုက်မယ် ..မင်းကဘာကောင်လဲ ..?
လောင်ကီး ကုလား လား… ?
မြန်မာပြည်သား …မွတ်စလင်ကုလားဆို ….မင်းအလုပ်မင်းဆက်လုပ်ပါ …
နေရာတကာ .. စွတ်စွတ်ဝင်မပါနဲ ့..ဟုတ်လား
မင်းကိုထပ်ပြောမယ် …. ရခိုင်လူမျိုးဆိုတာ .. ဒို့အမျိုးသား … မင်းကြားထဲကဝင်ပီး
ဖင်မယားနဲ ့…. ဒို ့နိုင်ငံထဲနေရင် .. ဒို ့နိုင်ငံရဲ့စည်းကမ်းကို လိုက်နာရမယ်ဆိုတာ …မင်း
နားမလည်ဘူးလား … မင်းကဘာအချောင်လိုချင်နေတာလဲ … ဘာအခွင့်အရေးတွေကို
စိတ်ကူးယဉ်နေတာလဲ …. ဒို ့သမိုင်း ဒို ့ဖာသာဆက်ရေးမယ် … ဒူးနေရာဒူး …နေ
သဘောက်နေရာသဘောက်နေ .. သဘောက်ဆိုတာ ကို … မင်းနားမလည်ရင် … မင်း
တို ့အမျိုးတွေကိုမေးကြည့် … ဟုတ်လား …
ငါရေးလိုက်တဲ့ ကဗျာမှာ … ဘာသာရေးလှုံ ့ဆော်မှု မပါဘူး … လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမပါဘူး ..
မင်းတစ်ယောက်ထဲ .. စာမတတ်ပဲ …ပြောနေတာ … အဲလောက်အဆင့်အတန်းနိမ့်တဲ ့မင်း
ဦးဏှောက်နဲ ့… နေရာတကာဝင်ဝင်မပါနဲ ့…နားလည်လား..။
မင်းတို ့လိုကောင်တွေအတွက် … မြန်မာပြည်မှာ နေရာမရှိဘူး ….
ရခိုင်..ရခိုင်ဘဲ ထည့်ပြောနေတာ …. မင်းအမျိုးတွေကို ..ရခိုင် တွေ လိုးနေလို ့လား ..
မင်းတို ့မုတ်ဆိတ်မှာ .. ရခိုင်လီးကိုချည်ပြီး … တစ်နေ ့၅ ခါ စုပ်ကွ…
ဗလီတတ်မနေနဲ့… အချိန်ကုန်တယ် .. ကုသိုလ်မရဘူး … ငါပြောသလိုလုပ်လိုက် ..
မင်းတို ့ဘုရားကို ..ကိုယ်နဲ ့မကွာ ကိုးကွယ်တာပိုမြတ်တာပေါ့ .. ဟုတ်လား …လီးကုလား..</del>
လက်သည်းဆိတ်ရင် .. လက်ထိပ်နာလို ့… ဒီစာရေးတာပဲ ..
***ကျုပ် … ဗမာစစ်စစ် တစ်ယောက်ဘဲ … ရခိုင်လူမျိုးမဟုတ်ပါ***
အယောင်ဆောင်မနေနဲ့ မင်းကခွေးကုလားဆိုတာ တော်တော်များများသိတယ်။
သတ္တိရှိရှိ ဗြောင်ရေး၊ အခြောက်လိုလို မြန်မာယောင်မဆောင်နဲ့။
သံတွဲသားကလီးများ တော်တော် ဇာတိပြနေပါလားကွ ဟေ ၊ ..င်ယားနေတယ် ၊
တော်တော်ဇတ်ရှုှုပ်တဲ့ သံတွဲ ၊ ဟိုအယင် လို သံတွဲကို ဘလော့ထားမှ အေးချမ်းမယ် ၊
မိမစစ် ဖမစစ် နိုင်ငံမဲ့ သူတောင်းစားမျိုး ။
ကဲ အဲဒါသာ ကြည့်ပေတော့ ပရိသတ်ကြီးရေ အခြောက်တိုက် ရိုင်းစိုင်းပြီး ဗမာနဲ့ ရခိုင်ကို ရန်တိုက်ပေးပြီး ကြားထဲက လက်ခုပ်တီးပြီး ကမလို့ပေါ့လေ။ အဲဒါသာကြည့်တော့။ ရခိုင်ဘက်က အမျိုးတွေ ကုလားတွေ ပြောတာကို မယုံကြနဲ့နော်။ တော်ကြာ သူတို့ အကြိုက်တွေ့ နေမယ်။
စိတ်မပူကြပါနဲ့ ဒေါသမကြီးကြပါနဲ့ သယ်ရင်းတို့ အမှန်တရားဟာ တန်ပြန်ပါတယ် ။(Newton’s 3rd law of motion)။မြန်မာအစိုးရ က မြန်မာပြည်က သတင်းတွေ ကို လိမ်ပြီးဓာတ်ပုံ အတုတွေ နဲ့ ကမ္ဘာ ကို လိမ်တဲ့ ဝါကာ အူဒင်(အမေရိကန်နေ မတန်လို့ သူ့ဘွဲ့ထည့်မရေး) ကို အမေရိကန်က ရှေ့နေတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး တရားစွဲဘို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းသတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။
အဲ့ကောင်က အမေရိကန်ကနေ ရိုဟင်ဂျာတွေ ကို ကြီုးကို်င် နြေ့ပီး မီဒီယာတွေ ကို သတင်လိမ်ပေးတာတဲ့ အမေရိကန်ကရှေ့နေက ကူညီပြီး တရားစွဲမယ်ဆိုတာ ခုလေတင် freedom news group မှ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်
ခုနောက်ပိုင်း အားတဲ့ အချိန်လေး ရသလောက်အချိန်လေးမှာ ဂေဇက် ကိုပဲ ကြည့်မိပီး တခြားသတင်း ဆိုက်တွေ မကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုသတင်း အကြောင်းအရာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အမိ မြန်မာပြည် နဲ့ပါတ်သက်လာရင် တင်ပေးစေချင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် အရင်က ဘာသာရေး လူမျိုးရေး နဲ့ ပါတ်သက်လာရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီး လေးစားမိပါတယ် ။ ငါ က ဘာသာတိုင်း လူမျိုးတိုင်းကို လေးစားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ပါ ။ ဒါပေမဲ့ ခုနောက်ပိုင်း ရိုဟင်ဂျာ အရေးရယ် လက်ရှိနေ့စဉ် ထိတွေနေရတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တွေထဲက ဖိလစ်ပိုင် တွေ နဲ့ ကလားတွေ ဆက်ဆံရေးရယ်ကိုကြည့်ပီး ကုလား တွေကို အမြင်မကြည်တော့ပါ ။ ဘယ်လိုမှ ကြည်လို့ လေးစားလို့ မရတဲ့ စိတ်ဓာတ် အဆင့်အတန်း ပိုင်ရှင်တွေပါ ။ လက်ရှိ အနောက်တိုင်း သားတွေကလည်း ဖိလစ်ပီး တွေ ကိုနှစ်သက်တယ် ။ ဖိလစ်ပီး အများစုက အဆင့်အတန်းရှိတယ် ။ကုလားတွေက ကျွန်တော့ ကိုလည်း တယောက်တည်း သမား ဆိုတော့ သွေး စမ်း ချင်တယ် ။ ဗိုလ်ကျတယ် ။ သည်းခံ နိုင်သလောက် သည်းခံ ပေးခဲ့ပေမဲ့ တခါတရံ ပေါက်ကွဲလာရင် ” မင်းတို့လို ကောင်တွေ ကို သောက်ဂရု မစိုက်လို့ တယောက်တည်း လာလုပ်နေတာကွ ! လာချမယ် ” လို့ စိန်ခေါ်ဘူးတယ် ။ အဲဒီလို ကျတော့လည်း စောက်ကလား တွေငြိမ်နေတယ် ။ မနေ့ည က ကားမောင်းနေတာကို ဘေးကထိုင်လိုက်လာတဲ့ စောက်ကလား က ဟိုလိုမောင်း ဒီလိုမောင်းနဲ့ ဆရာ လာလုပ်နေတာနဲ့ သံချောင်းနှစ်ချောင်း ထောင်နေတာကိုတည့်တည့်ဝင်တိုက်ပေးလိုက်တယ် ။စောက်ကလား ကြောက်သွားတယ်ထင်တယ် ။ ကျွန်တော်တမင် ဝင်တိုက်မှန်းလည်းသိတော့ No problem ! No Problem ! ဆိုပီးဆက်ပီးဆရာမလုပ်ရဲတော့ဘူး ။ ကုမ်မဏီ မှာ ရန်ဖြစ်ရင် ကိုယ့်သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ ပြန်ပို့ခံရမယ်ဆိုတော့ ဒါကို သူတို့ ကြောက်တာလည်းပါတယ် ။
ဟဟ အဲဒါဆိုရင်သဘောပေါက်။အများနဲ့တော့ သွားမလုပ်နဲ့နော် ဒီကောင်တွေကလူများရင်
ခွေးတွေလိုဝိုင်းကိုက်တတ်တယ်။၁ယောက်ချင်း one by one စိန်ခေါ်ကြည့်ပါ။
မင်းကို ကုလားကျင့်ကုလားကြံနဲ့ ဝိုင်းဗျင်းဖို့ကြံပါလိမ့်မယ်။သတိထားပါ သူငယ်ချင်း။
ကျနော်သိသလောက်ပြောရရင် သူငယ်ချင်းကုလားများဟာ ၉၉% ကလိမ်ကကျစ်ချည်းဘဲ
ဆက်ဆံဖို့ လုံးဝမကောင်းတဲ့ ကူလီကူမာ လူမျိုးနွယ်တွေပါဘဲ။
ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကို ကျုပ် ပေါက်လွှတ်ပဲစားပြောကြည့်မယ်
နှုတ်တစ်ရာစာတစ်လုံး ဆိုတဲ့သဘောကလေး ခင်ဗျားတို့ သိဘို့လိုလိမ့်မယ်
အဲ့သည် ရခိုင်ဘင်္ဂလားနယ်စပ်က လဝကတွေ ကနေပြီးတော့
ခင်ဗျားတို့ ရဲ့ အချစ်တော် ကလားတွေကို စောက်ဆံယူပြီး အိမ်ထောင်စုစာရင်းတွေ လုပ်ပေးလိမ့်မယ်
ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လို ကာကွယ်နိုင်မလဲ
ခင်ဗျားတို့ တစ်ကယ်လုပ်ရမှာက ကလားတွေကို ဆဲနေဘို့ မကြေနပ်ဘို့မဟုတ်ဘူး
ကလားတွေဘဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် အွန်လိုင်းပေါ်တက်အော်နေလို့ ဘာများထူးသွားမှာလည်း
မြန်မာပြည်ရဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးပြဿနာ ခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်နားလည်သလဲ
တာလီဘန်ဆိုတဲ့ ကောင်တွေ လီးလိုမှိုလိုပြောတာကို ခံစားနေမယ့်အစား
ဆရာတော်ကြီးတွေဟောကြားတော်မူတဲ့ နိဗ္ဗာန်ရောကင်ကြောင်းတရားတွေနာပြီး ခံစားဂျဘာလား
မြန်မာပြည်မှာက ကလားဆို ဘလိုင်းကြီးဝိုင်းမုန်းနေကြတဲ့ဥစ္စာ
ကလားက အကြမ်းလာဖက်လို့ကတော့ ဘုံရန်သူဆိုပြီး ဝိုင်းချတာ ဘာများခက်တာမှတ်လို့
ဒီကလားတွေ ဒုတ်စွဲ ဓါးဆွဲ လုပ်နေတာကို ဘယ်ကောင်က မြေတောင်မြှောက်ပေးနေတယ်လို့
လူစုလူဝေးကို စစ်တပ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေက ဘယ်တုန်းက လက်ပိုက်ကြည့်နေဘူးလို့လည်း
ဆဲ နေ ဆိုနေတဲ့ သရဲဂေါင်းတွေ
လေ တရွှီးရွှီး နဲ့လားကလီး ….. လားဗမီး … လိုင်ရခီး မုန်တိုင်း တိုက် မနေကြပါနဲ့။
အမှတ်တကယ် ကို နဂိုက နီပါတယ် ဆိုတဲ့ သွေး ကို ရဲ ပါတယ်လို့အာမခံနေကြတဲ့
သရဲ ဂေါင်းတွေရယ် ….
ငထွားက လေနဲ့ခါးနာ ပေးနေတဲ့ သရဲဂေါင်းတွေရယ်…….
လက်မထိပ် အပ်စိုက် အူနှုတ်ပြမဲ့ သရဲဂေါင်းတွေရယ် …….
ဆိုင်ဘာ (Cyber) လေသေနတ်တွေ ခဏရပ်ပြီး ရခိုင်ပြည်ကို လာလှည့်ပါ ။
နိဂိမိ ကျောက်ဖြူမြို ့မှာ နေပါတယ် ။
အနည်းဆုံး သရဲဂေါင်း အယောက် ၂၀ဝ လောက်ကို စားရိပ်ငြိမ်း ၃ လ ထားနိုင်ပါတယ် ။
ဒါး ယူခဲ့ပါ ။ ဒုတ် ယူခဲ့ပါ ။ ကန်ဒို ရှမ်းဒါး ငှက်ကြီး လေးဂွ ဂျင်ကလိ အကုန် ယူခဲ့ပါ ။
ကျုပ်ရဲ့Camp မှာတော့ သရဲဂေါင်းတွေ အတွဲ ရဲဆေးဖြစ်တဲ့ ဇေ အရက်ဖြူနဲ ့
ဒူးတုန်ရင် ကျပ်စည်းနိုင်အောင် တခါသုံး ဒူးငြမ်းတွေ စီစဉ်ထားပါတယ် ။
ကုလားရွာတွေဆီကို ပို ့ပေးဖို့Dump Truck5စီး ၊ Light Truck4စီး ၊
Pajero 1 စီး အဆင်သင့်ရှိပါတယ် ။
လာလှည့်ကြပါ သရဲဂေါင်းတို့။
တပ်မ ၇ရ မှ သင့်ကို အလိုရှိသည် ။
မင်းက ငါတို့ ကုလား မကျေနပ်လို့ မကျေနပ်ကြောင်း ပြောတာကို အခွင့်ကောင်းယူပီး ကြားထဲက လာကြွားနေသေးတယ် ။ချီးမှပဲ ။ bull shit ! dog shit !
စာထဲမှာမှ သတ္တိမရှိနိုင်ရင် အပြင်မှာ သတ္တိရှိဖို့တော့ ခက်ပြီပေါ့ဗျာ။ ဓားသွားထက် ကလောင်သွားထက်တယ် ဆိုတဲ့စကား ကြားဖူးမှာပါ။ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းကတော့ ကိုယ်တိုင် လက်နက်ကိုင်တိုက်သူ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့စာတွေကြောင့် လွတ်လပ်ရေးကို လက်နက်ကိုင် တိုက်သူတွေ အများကြီး ပေါ်လာခဲ့တယ် ဆိုသလိုပေါ့ဗျာ။ စာနဲ့ သတိပေးနိုင်တာလည်း မဆိုးဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
စိတ်ချပါ ရောက်ခဲ့ရင်လဲ ခင်ဗျားအကူအညီကိုယူစရာမရှိပါ။
အကောင်းဆုံးက ဘာမှဝင်မပါဘဲ အေးအေးဆေးဆေးနေပေးရင်ကိုရပါပြီ။
ကောင်းရင်ကောင်းတယ် မကောင်းရင်မကောင်းဖူး ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ် မကြိုက်ရင်
မကြိုက်ဖူး လွပ်လွပ်လတ်လတ်ပြောပါရစေ လူကြီးမင်းတို့ ၊ ကိုမိုးတိမ်ပြောသလို
အေးဆေး နေပေးကြပါနောင်တော်ကြီးတို့ရာ ။